Isobho Ukudla ukuthi ashise amanoni: zokupheka ngezithombe ekhaya Izibuyekezo
Kulesi sihloko, sizokutshela konke mayelana ekudleni isobho ukuthi ashise amanoni. Lezi izindlela esihlwabusayo izitsha enempilo, ungase futhi uthole ukuthi uma ufunda indaba lelungiselelwe.
izazi zokudla Modern phikisana kulokho kwesisindo indlela kuyaphumelela. Othile ubiza ukunikeza akhuluphale, umuntu liyakwenqabela ukudla ukudla equkethe carbohydrate okusheshayo, futhi ezinye iziguli sinquma amavithamini nemithi. Nokho, odokotela kusho izakhamuzi ngazwi linye ephikelela awukwazi senqabe ukuthi adle, kudingeka bahlale silondoloze amazinga efanele kashukela. Uma kungenjalo, umuntu engozini ukuzwa isifiso zingalawuleki, bese uyeke ukudla kakhulu kuyoba cishe akunakwenzeka. Yingakho odokotela abaningi batusa ukuba udle emini ngokuvamile lokho kwanele futhi izingxenyana ezincane. Futhi lapha kubalulekile ukuba bazinqumele imikhiqizo engcono edliwayo nganoma isiphi isikhathi sosuku, ngaphandle kokwesaba umonakalo sibalo. Sikunikeza uhlu elandelayo:
Paps, uma emini wena ziyeza amandla umthwalo emsebenzini noma ejimini.
Izithelo - 18 pm (njengoba carbohydrate ayikwazi kugaywe ngaphandle elangeni).
Imikhiqizo yobisi noshizi.
Inani elincane namantongomane.
Imifino e yimuphi ubukhulu (Yiqiniso, ngaphandle amazambane, izaqathe abilisiwe no-beetroot).
Inyama, yenkukhu nenhlanzi.
Kubalulekile ukufunda indlela ukupheka lokhu kudla okumnandi - ke awufuni ukusebenzisa esitolo ngoba isoseji noma ushokoledi. Futhi yingakho sifuna ukuba ikutshele ukuthi ukupheka isobho elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, ashise amanoni ekhaya. Izindlela ukulungiswa izitsha okumnandi ingafundwa ngezansi.
Vegetable isobho yokudla ukuthi ashise amanoni. Ungadliwa ekhaya
abesifazane abaningi bathi Ukudla isobho eye yabasiza ulahlekelwe isisindo. Amakhilogremu behamba kancane, futhi abazange nokucindezeleka njengoba neze nokudla yena ekufeni. Le ndlela ufanelwe ezinemininingwane cwaningo, njengoba abanye abantu bathi ukudla isobho akazange kuthinte isimo sabo. It kuvela ukuthi ekudleni isobho ukuthi ashise amanoni - kungcono Omunye umlando omuhle. uzama nje ukunciphisa umzimba ukwenza isidlo sokuqala imifino okune-fibre. Ngaphezu kwalokho, musa uzengeze inyama, uzama ukunciphisa okuqukethwe amafutha umkhiqizo osuphelile, futhi ulisebenzise ngaphandle isinkwa. Ngakho, abantu intuitively kunzima ukulinganisela, musa mix amafutha kanye carbohydrate, futhi kulula ngakho ukuqeda isisindo okweqile. Kwakungenzeka kanjani ukupheka isobho yokudla ukuthi ashise amanoni? Ungadliwa ukudla engcono ungafunda ngezansi.
Leresiphi esebenzisa ama-amazambane, ukusetshenziswa elibangela ukwanda okusheshayo kanye iconsi okusheshayo e kashukela. Ngakho yini ongayenza ukuze usisuse imikhiqizo noma iwukudambisa umthelela walo omubi. Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje wena ukuhlanza nezilimo eziyizigaxa begeza kubo, Chop indawo endishini amanzi amahora ambalwa. I isitashi ahlukaniswe uhlala emanzini, futhi ngokuphelele ungakwazi ukwengeza ngokuphepha amazambane isobho. Ngakho, iresiphi:
Beka phezu komlilo ebhodweni ngamanzi wakufaka lonke bahlanza beet wakhe. Nakuba amanzi amathumba, ukwenza ezinye ukupheka nezinye imifino.
Ikhasi futhi usike tincetu amazambane amabili.
Inhloko ikota iklabishi iklabishi fresh sibe yimichilo mncane.
Fry epanini oqoshiwe anyanisi, izaqathe yashizi thinly lisikiwe amnandi bell pepper.
Lapho amanzi kuziwa ngamathumba epanini, susa ngesipuni slotted nokuvumela beet kuphole. Imifino ngobunono ayifake amanzi nokwehlisa ukushisa.
Sika chilled beetroot Umkami futhi ulithumele ebhodweni. Ngokushesha uthele amanzi kancane uviniga.
Lapho isobho usulungile, wayendlala phezu kwezitsha, ufafaze dill nesweli nengulube. Esikhundleni imayonnaise, sebenzisa ukhilimu omuncu ne ephansi fat noma ukwenza ngaphandle refueling. Yiziphi ezinye isobho yokudla ukuthi ashise amanoni? Ungadliwa ngezithombe ungase ubone lapha.
Isobho of isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Mhlawumbe wonke umuntu oye wezwa kuBaba futhi ngalokhu dish ngokuyisimangaliso, ashise amanoni, bese uvumela ukuba ulahlekelwe isisindo. Ngempela, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, eluhlaza uqukethe amavithamini amaningi zinhle kakhulu empilweni. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi lapho sekuvuthiwe iningi izinto ubhujiswe. Kodwa kukhona micronutrients kanye fibre, kudingekile kangaka wonke umuntu ehamba ngendlela enempilo. Ngakho, iresiphi:
Uhlakaze zibe emapheshana emihle eyodwa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, inhloko elincane iklabishi, ama amane, amabili pepper Bulgarian elibomvu, izaqathe kanye ezine Songa imifino kuso.
Engeza 500 amagremu ubhontshisi oluhlaza bese uthele wonke ijusi utamatisi, buhlanjululwe ngamanzi ngaphambili.
Beka i-pan phezu ukushisa kanye ibila isobho, embozwe imizuzu engu-20.
Isobho lenkukhu ngesitayela Thai
Nansi iresiphi for inkambo simnandi kakhulu kuqala. Azikho amazambane, okuyinto contraindicated ekunciphiseni umzimba. Kodwa isobho iqukethe inkukhu webele kanye eziningi imifino ewusizo. Pheka kungaba silula:
Beka i-pan phezu komlilo bese uthele phansi namafutha amancane zemifino. inkukhu amabele amabili, pre-cut emapheshana, gazinga kuze brown golden. Ekupheleni ukubeka kuso amahlumela ngesikele sokuthena ambalwa Thyme nesweli oqoshiwe.
Lapho inkukhu isicishe ilungele, uyifaka anyanisi, uthathe izindandatho uhhafu, futhi izaqathe ogayiwe.
Phuzi futhi zibe bomvu bell pepper fake nquma futhi uthumele epanini.
A amahlumela ngesikele sokuthena ambalwa asparagus Imi zibe yizicucu ezine futhi omunye obabayo pepper encane nquma fake kakhulu. Xhuma imifino nezinye ukudla bese upheka konke ndawonye kuze segolide.
Thela pan inkukhu umhluzi, usawoti, pepper bese wengeza wezipuni ezimbalwa soy sauce.
Letha isobho ukuze ngamathumba, ubilise imizuzu eyishumi. Ekupheleni wamfaka utamatisi ezincane, pre-lisikiwe, oqoshiwe garlic kanye cilantro oqoshiwe.
Ladle isobho, wayithela ezitsheni; wafaka ngamunye Tofu, Diced. Khumbula ukuthi uma ufuna ukuthola Chile okuhle kwesisindo, isobho Kufanele udliwe ngaphandle isinkwa.
Siyaqhubeka cabanga isobho yokudla ukuthi ashise amanoni. Ungadliwa izitsha ungacabanga ngokwabo, kodwa kunalokho "lula" kubo. Siyobonisa nokuthi ungakwenza kanjani lokhu nesibonelo ezilandelayo:
Thatha 400 amagremu of yenkomo engenamafutha, sinqume zibe cubes kanye gazinga epanini ngqo ku esincane samafutha zemifino.
Endaweni ehlukile, ukulungiselela ukugcwaliswa. Ukuze wenze lokhu, onion Diced, isanqante esisodwa esikhulu futhi amnandi bell pepper anemibala ehlukene. Beka imifino epanini evuthayo bese Fry kwabo kuze brown golden. Ekupheleni, engeza Thyme, garlic kanye wezipuni ezimbalwa utamatisi unama.
Xhuma ku ukudla pan uzilungiselele, ugcwalise ngamanzi bese upheka ndawonye. Lapho isobho amathumba, ayifake ikani uphizi ekheniwe, usawoti, pepper kanye oregano ukunambitha.
Lapho isidlo usulungile, wayimboza amapuleti. Ungayisebenzisi ukhilimu omuncu noma imayonnaise for refueling, kungenjalo mikhiqizo izokwenza isobho amafutha ngaphezulu. Kungcono ukukhonza naye bran - ukuzisebenzisa njengoba crackers.
Iklabishi isobho nge inkukhu
Ajwayelekile zonke Russian ungenza ukudla ukuze zaba nomthelela ekubeni abantu isisindo. iresiphi:
Inkukhu webele thumba emanzini anosawoti, susa, epholile futhi likhiphe le micu.
Ukuze ukugcwaliswa eceleni Fry anyanisi oqotshiwe, pepper amnandi futhi isanqante ogayiwe. Ekupheleni ukupheka, engeza unamathisele utamatisi kanye garlic kancane. Beka imifino epanini inkukhu umhluzi.
Beka ukuze inkukhu efanayo futhi iklabishi oqoshiwe.
Isizini ngosawoti kanye pepper bese wengeza utamatisi, uthathe cubes.
Indishi eqeda Khonza hot.
Isobho Ukudla ukuthi ashise amanoni. Izibuyekezo
amadoda nabesifazane abaningi abaye anquma ukuba anciphise umzimba, uke wasebenzisa Ukudla esekelwe ukusetshenziswa izitsha yokuqala. Zisetshenziswa le njongo siye echazwe isobho yokudla ukuthi ashise amanoni (zokupheka). Izibuyekezo neminye omuhle kakhulu, futhi asingabazi uhlu izinzuzo main:
It akuzange kudingeke ukuba ngokuphelele ukushintsha imenyu evamile.
Isobho Ihambe simnandi kakhulu, ngakho akudingeki ukuya iminikelo enkulu ukudla.
Ezenye zibonakala cishe ngokushesha.
Kulesi sihloko, sakhuluma ngokuningiliziwe izimo ezingenza ukudla isobho ephumelela kunazo. Khumbula ukuthi:
Musa ukuxhuma amafutha ne-carbohydrate.
Isetshenziselwa ukupheka ukudla nge amafutha kancane.
Kungcono ukuba bangayeki amazambane nemvubelo breads.
Cebisa izitsha yokuqala imifino equkethe fiber.
Ngokuvamile umphelelisi isobho bran.
Uma ulandela iseluleko sethu, bese nawe maduze ukushiya isisindo eyengeziwe ngaphandle umonakalo empilweni.
Amazinga ingane 37